TARAZO NAVELAN’I HERY RAJAONARIMAMPIANINA : Mitohy ny tsy fahazakana demokrasia
Mandova ny toetra ratsy nataon’ny filoha teo aloha Hery Rajaonari-mampianina ihany koa ve i Rivo Rakotovao izay izy no namindra ny fahefam-pitantanana ny firenena tamin’ity farany ? 5 octobre 2018
Niaraha-nahita ny tsy fahazakan’ity filoha teo aloha ity ny demokrasia sy ny fanosihoseny tanteraka ny fahafahana miteny. Porofon’izany, rehefa tsy mitovy firehana sy tsy mitovy fijery aminy eo amin’ny tontolo politika dia tsy mahazo sehatra ahafahana maneho hevitra an-kalalahana.
Rehefa hitany fa manohintohina ny haja amam-boninahitra nananany dia nolazaina fa manelingelina ny filaminam-bahoaka ka hetsika maro no nokasain’ny mpanohitra natao fa nosakanan’ingahy Hery Rajaonarimampianina hatrany. Efa nametra-pialana amin’ny maha Filohan’ny repoblika azy izy saingy namela lova tamin’ny fitantanana namohehatra izay nanakianan’ny olona azy fatratra.
Raha nikasa ny hamoaka ny valin’ilay fitsapan-kevitra amin’ ireo kandida nokaraka-rainy ny teo anivon’ny Fes ny amin’ izay fomba fahitan’ny olom-pirenena ireo kandidà ity farany dia nilatsaka ny didy avy amin’ny Fanjakana fa tsy azo atao ny mamoaka io valin’ny fitsapan-kevitra io fa manohintohina ny filaminam-bahoaka,hono. Napametra-panontaniana ny mpanara-baovao ihany ny zava-nitranga raha tena fitsinjovana ny filaminana tokoa no tanjona tao anatin’iny fanapahan-kevitra iny na mbola mitohy indray ny tsy fahazakana demokrasia izay tarazon’ny fitondrana teo aloha.
Nafampana ny raharaha Morondava tamin’ity herinandro ity. Lasibatra hatrany ireo olona tsy mitovy fijery amin’ny fitondram-panjakana ankehitriny izay tarihan’ny filoham-panjakana Rivo Rakotovao. Fantatra fa nakaton’izy ireo ny radio tsy miankina ao Morondava izay fananana madiodion’ny solombavambahoaka voafidy avy amin’ny vondrona Mapar.
Novoizina fa mitaona ny olona hikomy sy hanakorontana tao Morondava ity radio tsy miankina ity kanefa miharihary ho hitam-poko, ho hitam-pirenena ny tarazo navelan’ny filoha teo aloha, Hery Rajaonarimampianina amin’ny tsy fahazakany demokrasia.
TARAZO NAVELAN’I HERY RAJAONARIMAMPIANINA
2018-10-05 14:44:19 par Brandon
Misy zavatra 5 mba tiana ambara kosa e :
1- iza moa no milaza aminareo fa misy demokrasia eto e ? Ny 95%-n’ny Malagasy tsy mahafantatra ny dikan’izany.
2- tsy demokrasia tandrefana no mety eto
3- samy hafa kosa ny resaka fitsapan-kevitra sy ny radio e !
4- ny fitsapan-kevitra dia ilay atao tsotra hoe "copier-coller" avy amin’ny any ivelny. Tsy hain’ny olona akory ny fomba fanaovana an’io eto (izay tsy mitovy velively amin’ny any andafy ny zava-misy sy ny manodidina iainana ), dia mitsolatsolana manao an’izany. Dia aleo tsy asiana mihitsy aloha kosa satria ny sarety no lasa eo anoloan’ny omby.
5- fa ny radio kosa dia hafa mihitsy. Tokony mamoaka vaovao MARINA foana ary tsy tokony hakatona, raha tsy hoe mamoaka zavatra mamoafady kosa angaha.